८.२१ अंकले घट्दा १११२.८७ विन्दुमा नेप्से | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण ८.२१ अंकले घट्दा १११२.८७ विन्दुमा नेप्से
on: २ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १७:१२ नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
८.२१ अंकले घट्दा १११२.८७ विन्दुमा नेप्से
२ अर्ब १६ करोडको कारोबारमा एभरेष्ट बैंकको ८८.५१ प्रतिशत हिस्सा
फागुन २, काठमाडौं (अस) । बिहीवार नेप्से परिसूचक ८ दशमलव २१ अंकले घटेको छ । दिनभरको कारोबारमा परिसूचक उच्च विन्दु १ हजार १ सय २१ दशमलव ६९ सम्म पुगेको छ भने न्यून विन्दु १ हजार १ सय १२ दशमलव १५ सम्म झरेको छ । बिहीवार १ हजार १ सय २० दशमलव ८२ विन्दुबाट कारोबार शुरू भएको थियो । अधिकांश समय घटेको बजार अन्त्यमा शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत घटेर १ हजार १ सय १२ दशमलव ८७ विन्दुमा पुगेको छ । कारोबारमा आएका १० समूहको परिसूचकमा सबै समूहको परिसूचक घटेकाले समग्र नेप्से घटेको हो ।
बिहीवार रू. २ अर्ब १६ करोड ६५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । बुधवारको तुलनामा कारोबार रकम रू. १ अर्ब ९२ करोड ७६ लाख बढेको हो । बुधवार रू. २३ करोड ८८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । यस दिन सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको संस्थापक शेयर कारोबार भएको छ । एभरेष्टको संस्थापक शेयर प्रतिकित्ता रू. २ सय ६५ मा रू. १ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख ३९ हजार बराबरको कारोबार भएको हो । एकै दिन एभरेष्टको संस्थापक शेयर बैंकका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठको परिवारले बेचेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटै परिवारको नाममा २५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर कायम राखेको भन्दै लाभांशमा रोक लगाएपछि श्रेष्ठका परिवार भित्रका सदस्यले उक्त शेयर विक्री गरेका हुन् ।
बिहीवार दुई ब्रोकरको माध्यमबाट एभरेष्ट बैंकको ७२ लाख ३६ हजार ३७५ कित्ता शेयर खरीद विक्री भएको छ । बिहीवारको कुल कारोबारको ८८ दशमलव ५१ प्रतिशत हिस्सा एभरेष्टको संस्थापक शेयरको कारोबारले ओगटेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत घटेर २ सय ३६ दशमलव ९२ विन्दुमा पुगेको छ ।
१६४ कम्पनीको कारोबार
१ सय ६४ कम्पनीको शेयर कारोबारमा २० कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १ सय २३ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २१ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य ४ दशमलव ७५ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ३ सय ७५ पुगेको छ । त्यस्तै, नेपाल सेवा लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य ८ दशमलव ४२ प्रतिशत घटेर रू. ५ सय ५४ पुगेको छ ।
१० बैशाख २०७६, मंगलवार १६:४६
१२५१.६० विन्दुमा नेप्से, ३६ करोड ८३ लाखको शेयर खरीद विक्री (२ बजेको अपडेट)
१० बैशाख २०७६, मंगलवार १४:१५
दोस्रो घण्टामा १४७ कम्पनीको २२ करोडको शेयर कारोबर (१ बजेको अपडेट)
१० बैशाख २०७६, मंगलवार १३:०९
१० बैशाख २०७६, मंगलवार १२:१३